Madaxweynaha JSL waxa uu tacsi u dirayaa ehliyadii iyo guud ahaan shacbiga SL Madaxii Xoghaymaha Xafiiska Madaxweynaha oo Xalay geeriyooday. |
Madaxweynaha JSL waxa uu tacsi u dirayaa ehliyadii iyo guud ahaan shacbiga SL Madaxii Xoghaymaha Xafiiska Madaxweynaha oo Xalay geeriyooday.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Axmed Maxamed Siilaanyo, isagoo ku hadlaya magaciisa, iyo kan shacabka Somaliland, waxa uu dhambaal tacsi ah u dirayaa guud ahaan shacbiga Somaliland ee uu ka baxay Marxuum Maxamed Warsame Xirsi (TITI) oo ahaa Madaxii Xoghaymaha Xafiiska Madaxweynaha oo Xalay ku geeriyooday Magaalada Hargeysa laguna aasay maanta oo ay taariikhdu tahay 04/01/2016.
Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale tacsi u dirayaa guud ahaan shaqaalaha Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland, Qoyskii, Eheladii, Qaraabadii, Asxaabtii iyo Guud ahaan shacbiga Somaliland.
Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku tilmaamay waayo arag, ruug cadaaya oo qaranka Somaliland ka baxay, kuna sifaysnaa karti, dedaal iyo daacadnimo uu u hibeeyey shaqadiisa, kaalin muhiimana ku lahaa Madaxtooyada iyo Qarankaba.
Madaxweynuhu waxa uu marxuumka Alle uga baryayaa inuu naxariistii jannatu fardawsa ka waraabiyo, Shaqaalaha Madaxtooyada, Qoyskii, Eheladii, Qaraabadii, Asxaabtii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxayna Samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo.